Akụkọ - Growdị Ọganihu nke Mmiri Mmiri Aquarium Na Mgbapụta Mmiri Mmiri
Uto Na Eso nke Mmiri Mmiri Aquarium Na Mgbapụta Mmiri Mmiri
Thedị Ọganihu nke Mmiri Mmiri Mmiri Aquarium Na Mgbapụta Mmiri Mmiri
Ma YUANHUA ụlọ ọrụ, anyị R&D ngalaba na-mgbe niile na-emepe emepe ọhụrụ ngwaahịa, nke izute chọrọ nke dị iche iche ahịa na anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na ahịa.
O juru anyị anya na ọrịa okpueze ọhụrụ ahụ metụtara, ụlọ ọrụ aquarium craft waterfall na ahịa ahịa anyanwụ dị ike n'afọ a, yana site n'ụzọ, nfuli mmiri aquarium na nfuli mmiri anyanwụ etoola na omume a.
Nfuli mmiri na-agbasakwa ọrịa ahụ. Mwepụta nke mba ndị kachasị kọpa ọla kọpa n'ụwa belatara, mana ọla kọpa nke China arịwanye elu. Waya ọla kọpa bụ isi ihe ọkụkụ maka nfuli mmiri, na-eme ka mmụba nke mmepụta nke ụlọ ọrụ mgbapụta mmiri.
Kọ ume na mmetọ gburugburu ebe obibi abụrụla ihe kachasị mkpa a ga-edozi na mmepe nke ọha mmadụ taa. N'ime obodo
Nsogbu nke ịzụ ụmụ anụmanụ na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ na mpaghara a na - egbochikarị site na njedebe mpaghara - n'ihi nsogbu ndị dị n'elu, mgbapụta mmiri fotovoltaic na - apụta dị ka oge achọrọ.
N'akwụkwọ a, a na-achịkọta ụkpụrụ bụ isi na usoro nke usoro mgbapụta mmiri fotovoltaic, a na-atụlekwa nyocha nyocha na ọnọdụ nke usoro mgbapụta mmiri nke fotovoltaic, akwụkwọ a na-atụle ma na-atụle ntụle nyocha ọzọ na-esote nke mgbapụta mmiri fotovoltaic akwụkwọ a na-enyocha ihe ga-ekwe omume. na uru mmekọrịta ọha na eze nke mgbapụta mmiri fotovoltaic, a na-atụ anya atụmanya ngwa nke sistemụ mgbapụta fotovoltaic.
Igwe mmiri mgbapụta nke foto fotovoltaic sitere na modulu batrị, njikwa njikwa USB, moto, mgbapụta, pipeline na valvụ. Principlekpụrụ nke usoro mgbapụta mmiri nke fotovoltaic bụ iji sel nke anyanwụ iji tọghata ike anyanwụ n'ime ike eletrik, wee chụgharịa moto ahụ iji kpoo mgbapụta mmiri fotovoltaic site na njikwa. Enwere ike iji sistemụ mgbapụta mmiri site na mmiri maka mmadụ na anụ ụlọ na mpaghara na-enweghị ike ọkọnọ, ogbugba mmiri n'ubi na ebe mgbasa dị elu dị ka agwaetiti oke na izipu. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, na oke nsogbu nke "nsogbu nri" na "nsogbu ike" zuru ụwa ọnụ, ejirila nwayọọ nwayọọ too ya dị ka ngwaahịa mwepụta nke ụlọ ọrụ kachasị arụ ọrụ iji dozie nsogbu nke ala etolite etolite, meziwanye mmepụta ma jiri ike dị ọcha dochie ike ọkụ ike Ọ bụ usoro akụnụba ọhụrụ maka mmepe mmepe nke ọrụ ọdịnala dịka nchekwa mmiri na-akọ ugbo, njikwa ọzara, mmiri mmiri ụlọ na mmiri iyi obodo. Photovoltaic mgbapụta mmiri na-eji ike na-adịgide adịgide site na anyanwụ. Ọ na-arụ ọrụ mgbe ọwụwa anyanwụ na-akwụsị mgbe anyanwụ dara. Ọ dịghị mkpa ka ndị ọrụ na-elekọta ya. Ọ dịghị mkpa mmanụ dizel na grid ike. Enwere ike iji ya na ogbugba mmiri n'ubi, mmiri mmiri sprinkler, ogbugba mmiri n'ubi na ulo ogwu ndi ozo. Ọ nwere ike ịchekwa mmiri ma chekwaa ume, ma belata oke ego itinye ego ike mmanụ ala. O nweghị mkpọtụ, enweghị mmetọ gburugburu ebe obibi, enweghị oriri nke ike ọkụ, akpaka, usoro ntụkwasị obi dị elu nwere ntụkwasị obi. Ọ bụ ike ọhụrụ na ngwa teknụzụ ọhụụ nke ụwa "nsogbu nri" na "nsogbu nsogbu ike" ngwọta usoro zuru oke. Ruo ogologo oge, ụkọ mmiri jọrọ obere
Post oge: Sep-07-2020